Internet Explorer9နှင့် သူ၏ အနာဂတ် - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Internet Explorer9နှင့် သူ၏ အနာဂတ်
အခုနောက်ပိုင်း အတည်မထွက်ခင်တည်းက တဖြည်းဖြည်း Hot လာတဲ့ Internet Explorer9ကိုများ ဘယ်လိုနေမလဲ စမ်းသပ်ကြည့်ချင်ကြမလား ??
နောက် အတည်ထွက်ရှိလာမယ့် Internet Explorer9နဲ့အတူ ပါရှိလာမယ့် New features တွေကိုများ ဘယ်လိုရှိမလဲ မြင်ဖူးချင်ကြမလား ??
Browser အားလုံးရဲ့ ကြားမှာ အများနဲ့ အတူ မတူထူးခြားတဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်တွေနဲ့ ထွက်ရှိလာတော့မယ့် Internet Explorer9ကို ယခုကတည်းက စမ်းသပ်ကြည့်ချင်သူများ အတွက် Internet Explorer9Platform Preview ရှိနေပါပြီ။ အခုပဲ ရယူ စမ်းသပ်ကြည့်ကြရအောင်။
ဒီနေရာ ကတော့ Internet Explorer9မှာ ဘာတွေ အသစ်အဆန်း စိတ်ဝင်စားစရာတွေ ပါဝင်လာမလဲ .. သူ့မှာ တစ်ခြား Browser တွေနဲ့ မတူအောင် ဘာစွမ်းဆောင်ရည်တွေများ ဖြည့်ဆည်းပေးထားမလဲ ဆိုတာ စမ်းသပ်ကြည့်လို့ ရမယ့် နေရာပါ။
အင်တာနက် မကောင်းလို့ သို့တည်းမဟုတ် အပိတ်ခံထားရလို့ သွားလို့ မရတာတွေ ဘာတွေ ရှိနေနိုင်သူများ အတွက် အနည်းအကျဉ်း နိုင်သလောက်လေး Internet Explorer9ကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
IE9 Test drive စာမျက်နှာမှာ ဘာတွေ စမ်းသပ်လို့ ရမှာလဲ ဆိုရင် လတ်တလောကာလမှာ စမ်းသပ်ပြင်ဆင်နေဆဲ Internet Explorer9မှာ ပါဝင်လာမယ့် Features တွေကို ခုလို အပိုင်း ( ၃ ) ပိုင်း ခွဲပြီး မိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ အဲတာတွေကတော့ -
* HTML5 Demos - သူ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတော့ စံမှီတဲ့ web နည်းပညာတွေကို ဘယ်လို မျှဝေပေးထားတယ် ဆိုတာ လေ့လာစမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့ ပြောရရင် - သူ့မှာ Border Radius လို့ခေါ်တဲ့ border-width နဲ့ border-style တွေကို ဘယ်လို ပြောင်းလဲနိုင်မလဲ ဆိုတာတွေ၊ CSS3 Selectors လို့ခေါ်တဲ့ nodes တွေကို CSS သုံးပြီး ဘယ်လို အလွယ်တကူ ရွေးချယ်နိုင်မလဲ ဆိုတာတွေ၊ DOM Events လို့ခေါ်တဲ့ Links တစ်ခုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အဲ့ဒီ့ Links ပေါ်မှာတင် သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေ အတိုချုံး ဖော်ပြချက်တွေ၊ .. စတာတွေ စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
* Graphics Demos - သူ့အောက်မှာတော့ ထူးခြားတဲ့ ဆန်းသစ်မှုတွေနဲ့ HTML5 Graphics တွေကို ဘယ်လို Create လုပ်ထားလဲဆိုတာ စမ်းသပ်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ဆိုရရင် - Falling Balls ၊ SVG–oids ၊ Business Charts ၊ Organization Chart ဆိုတာတွေ အတွက် ဘယ်လို စွမ်းဆောင်ပေးထားလဲ ဆိုတာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
သူ့ကို ဘာလို့ Internet Explorer9လို့ မခေါ်ပဲ Internet Explorer9Platform Preview လို့ ခေါ်ရပါသလဲ ??
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင် Internet Explorer9Platform Preview ဆိုတာ full web browser တစ်ခု မဟုတ်သေးပါဘူး။ သူထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က Web developers တွေအတွက် နောက်ထွက်လာမယ့် Internet Explorer နဲ့အတူ ပါဝင်လာမယ့် Web platform ကို ကြိုတင်သိရှိထားနိုင်ဖို့နဲ့ ကောင်းကွက် ဆိုးကွက်တွေကို အစောတည်းက ကြိုတင်ထောက်ပြထားနိုင်စေဖို့ ရည်ရွယ်ထားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Platform Preview ဆိုတာ beta version လိုမျိုး Customer တွေရဲ့ စိတ်ကြိုက် အခြေအနေကို ရောက်တဲ့ ထိ Build တွေကို တဖြည်းဖြည်း ပေါင်းသွားပြီး နောက်ဆုံး အားလုံး သဘောကျပြီ ဆိုတော့မှ Full browser အဖြစ် ရပ်တည်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးနဲ့ ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်ထားတာမျိုးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်လား ?? ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်လည်း စမ်းသပ်နေပါပြီ။ ပုံလေး ( ၂ ) ပုံလောက်နဲ့ Shortcuts လေးနည်းနည်း ပြလိုက် ၊ ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ စမ်းတဲ့ အချိန်မှာ ပို အဆင်ပြေအောင်လို့ပါ။
ဒီအောက်က ပုံကတော့ ကျွန်တော် Internet Explorer9Platform Preview ကို သုံးပြီး ကျွန်တော့်အိမ်ကို ဖွင့်ထားတာပါ။ အဆင်တော့ ပြေပါတယ်။
လတ်တလော စစချင်းကြည့်ရင် Browser သာဆိုတယ် Address Bar ပျောက်နေပါလိမ့်မယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့ Shortcut keys Ctrl+O နဲ့ ဖွင့်လို့လည်း ရသလို ၊ Page > Open ကနေလည်း မိမိ အလိုရှိရာ Address ကို ရိုက်ပြီး သွားနိုင်ပါတယ်။
Internet Explorer9Platform Preview ကို Install လုပ်လိုက်လို့ အရင် စက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ Internet Explorer အဟောင်းက ပျောက်မသွားပါဘူး။ သူတို့ ( ၂ ) ခုက Side by Side တည်ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Internet Explorer9Platform Preview ကို Install လုပ်ဆောင်ဖို့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ စက်တွေက Windows7(x86 or x64) ဒါမှမဟုတ် Windows Vista SP2 (x86 or x64) ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။
Internet Explorer9Platform Preview ကို စမ်းသပ်ကြည့်ပြီး မိမိမကျေလည်တာလေးတွေ သဘောမကျတာလေးကို Microsoft ဆီ တင်ပြချင်မယ် ဆိုရင်တော့ ဒီအောက်က Link ကနေ Download ချပြီး Internet Explorer9ကို စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ပါပြီ။
တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ Vista သုံးနေတဲ့ သူတွေ ဖြစ်မယ် ဆိုရင်တော့ Internet Explorer 8 နဲ့ DirectX 2D (D2D) ကို စက်မှာ အရင်ဆုံး Install လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ Internet Explorer 8 ကိုတော့ ဒီနေရာကနေ ဒေါင်းလုပ်ချပြီး အရင် Install လုပ်ဆောင်ထားပါ။ပြီးရင် DirectX 2D ကို Install လုပ်ဖို့အတွက်တော့ Platform Update for Windows Vista ကို ဒီနေရာကနေ ဒေါင်းလုပ်ချပြီး Install လုပ်ဆောင်ပါ။
အသုံးပြုရာမှာ လွယ်ကူစေဖို့ Internet Explorer9Platform Preview အတွက် Shortcuts တွေကတော့ ဒီမှာပါ။
* Ctrl + O: Openawebpage
* F10: Home
* F12: Developer Toolbar
* Alt + 5: Force IE5 rendering mode
* Alt + 7: Force IE7 rendering mode
* Alt + 8: Force IE8 rendering mode
* Alt + 9: Force IE9 rendering mode
* Alt + 0: Reset Document Mode to the page default
* Ctrl +/-: zoom in and out
* Alt + ?: Help
* Ctrl + S: Save Webpage As…
* Alt + /: About
MF မိသားစုဝင်များ နယ်မြေသစ်မှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။
Last edited by KznT; 07-03-2011 at 05:40 PM..
ကိုကိုသီဟ, ကိုဦး, ကိုဖြိုးငြိမ်း, ချစ်သမီး, ချယ်ရီမင်း, ဂတုံးလေး, ဆန်းမောင်, ဒဿဂီရိ, သန့်ဇင်ဌေး, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, ယောနသံ, နိုးတူး, AZM, bonge, g00gle, hlatoe, kluy, ko myo, maJunior, minthike, pannuko, phyomyintthein, sAnDViper, tu tu, Ye Aung, zo
23-09-2010, 08:57 PM
Sep 15, 2010 က Internet Explorer9Beta ထွက်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ရေးဖို့ အသေးစိတ် ပြင်ဆင်နေတာနဲ့ နောက် နည်းနည်းကျပြီး ဒီနေ့မှပဲ တင်ဖြစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ အရင်ကလည်း Internet Explorer9အကြောင်းကို Beta မထွက်ခင် Internet Explorer9Platform Preview ကတည်းက အပေါ်မှာ 26-03-2010 က ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ တော်တော်များများတော့ သိပ်စိတ်မဝင်စားကြဘူးပေါ့ - ဒါပေမယ့် သိပ်မကြာခင်မှာ IE9 က တော်တော်လေး Hot လာတော့မှာပါ - ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ အခု ကျွန်တော် Internet Explorer9Beta ကိုသုံးနေရင်းနဲ့ တော်တော်လေး User friendly ဖြစ်တာ သတိထားခဲ့မိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ထူးခြားချက်လေးတွေနဲ့ အပြင်အဆင် တစ်ချို့ကို မြန်မာမိသားစုဝင်များ ခံစားနိုင်စေဖို့ တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော့် စက်မှာ လောလောဆယ် Windows7Ultimate 32 bit တင်ထားပါတယ်။ Install လုပ်ရတာတော့ သိပ်ပြီး ခက်ခက်ခဲခဲ မရှိလှပါဘူး - မိနစ် နည်းနည်းလောက် စောင့်လိုက်ရင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း သူ့ ဘာသာ Install လုပ်ဆောင်သွားပြီး Restart ပေးဖို့ တောင်းပါလိမ့်မယ်။ Restart ပြန်တက်လာရင် အရင် Windows7မှာ ပါတဲ့ IE8 နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ သွင်းလိုက်တဲ့ IE9 ဝင်လာပြီး စတင် အသုံးပြုလို့ ရပါပြီ။
အောက်မှာ ဖော်ပြသွားမယ့် ပုံလေးတွေက တစ်ဆင့် Internet Explorer9ရဲ့ ပြောင်းလဲချက်လေးတွေ - အပြင်အဆင်လေး တွေကို ခံစားကြည့်ကြပါဦး - အရင်ဦးဆုံး ကျွန်တော် Internet Explorer9စစဖွင့် ခြင်းမှာ သတိထားလိုက်မိတာ Address bar နဲ့ Tab bar နဲ့က တစ်တန်းတည်း ဖြစ်သွားတာပါ - ဘာကောင်းလဲ ဆိုတော့ အရင်ကဆို ကျွန်တော်တို့တွေ Menu Bar, Navigation Toolbar, Bookmarks Toolbar, စသဖြင့် Toolbar ပေါင်း မြောက်များစွာနဲ့ အမြင်ရှုပ်နေရာကနေ ခုဆို Browsing Area ကို ကျွန်တော်တို့ ပိုပြီး ကျယ်ကျယ်လွင့်လွင့် မြင်ရပါပြီ။
နောက် Address bar မှာ စာလုံးတစ်ချို့ကို စရိုက်လိုက်တာနဲ့ Search Suggestions ကိုသာ Turn On လုပ်ထားမယ် ဆိုရင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ကိုယ်ရှာဖွေချင်တာကို Google Suggestions နဲ့ ရှာမလား Bing Suggestions နဲ့ ရှာမလား ဆိုတာ မိမိနှစ်သက်သလို ရွေးချယ် ရှာဖွေခိုင်းလို့ ရပါတယ်။ Enter ခေါက်တာနဲ့ Search Result Pages တွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့်အတန်း နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များ
Internet Explorer9နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Standards နဲ့ Performance တွေ ဘယ်လို သိသိသာသာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဆောင်ထားတယ် ဆိုတာ အသေးစိတ် ကျွန်တော်တို့ လေ့လာနိုင်ဖို့ IE9 Test drive ဆိုတာ ရှိနေပါတယ်။ IE9 Test drive စာမျက်နှာမှာ ဘာတွေ စမ်းသပ်လို့ ရမှာလဲ ဆိုရင် လတ်တလောကာလ စမ်းသပ်ပြင်ဆင်နေဆဲ Internet Explorer9မှာ ပါဝင်လာမယ့် Features တွေကို ခုလို အပိုင်း ( ၄ ) ပိုင်း ခွဲပြီး မိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ အဲတာတွေကတော့ -
* Browser Demos - Browser တစ်ခုရဲ့ ကြွယ်ဝတဲ့ အရည်အသွေးတွေကို ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာ စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Windows7အတွက် Application Shortcuts များ
IE9 မှာ ကျွန်တော် သဘောအကျဆုံး Feature လေး တစ်ခုပါလာပါတယ်။ အဲတာက ကိုယ်အမြဲတမ်းသွားနေကျ Sites တွေကို နေ့တိုင်း URL ရိုက်ပြီး သွားနေစရာ မလိုတော့ပဲ ကိုယ့် Windows7ရဲ့ Taskbar ကို Pin ထားလို့ ရတဲ့ Feature ပါ။ ( ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ရတယ် ဆိုတာ အောက်ဆုံးမှာ ကျွန်တော် ဖော်ပြထားတဲ့ Video ကနေ HD နဲ့ ကြည့်ကြည့်ပါ။ ) အဲလို ကိုယ်အမြဲ သွားနေကျ Sites တွေရဲ့ Page icons တွေကို Shortcut သဘောမျိုး ထုတ်တဲ့ နေရာမှာ နည်းမျိုးစုံ ရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတာကတော့ Site icon ကို Drag and Drop ဆွဲချတဲ့ နည်းနဲ့ Desktop ပေါ် ထုတ်လိုက်တာပါ။ အောက်မှာ ဆို ကျွန်တော် Facebook icon ကို Desktop ပေါ် Drag ဆွဲပြီး ထုတ်ပြထားပါတယ်။
နောက်နည်းလမ်း တစ်ခုက Tab ကြီး တစ်ခုလုံးကို Taskbar ရှိရာဆီ ဆွဲချပြီး Pin တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ပါ။ ဒါကလည်း ဘာမှ ခက်ခက်ခဲခဲ မရှိပါဘူး - ကိုယ် Pin ချင်တဲ့ Web စာမျက်နှာဖွင့်ထားတဲ့ Tab ကို Drag ဆွဲချလာပြီး Taskbar ပေါ်လွှတ်ချ လိုက်တာပါပဲ။ အောက်ဖော်ပြပါ ပုံမှာတော့ Taskbar ထဲဝင်နေတဲ့ Facebook Shortcut ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း Shortcut တွေကို Taskbar ထဲထည့်ထားတဲ့ နေရာမှာ shortcut တစ်ခုတည်း အနေနဲ့တင် ရောက်လာမှာမျိုး မဟုတ်ပဲ အဲ့ဒီဆိုဒ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ချို့ဆီကိုပါ jumplist နဲ့ သွားလို့ ရပါသေးတယ်။
အခြားသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု တစ်ချို့
Firefox တို့ Google Chrome တို့လို တစ်ခြား နာမည်ကြီး browsers တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး Internet Explorer မှာလည်း Download လုပ်ငန်းစဉ် လုပ်ဆောင်တဲ့ အချိန်မှာ အလွယ်တကူ စီမံခန့်ခွဲနိုင်မယ့် Download Windows ကလည်း အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပြောင်းလဲပေးထားပါတယ်။
ဒီအောက်မှာကတော့ New Tab တစ်ခု ဖွင့်လိုက်ရင် ကိုယ်သွားခဲ့ဖူးတဲ့ Sites တွေကို စီတန်း ဖော်ပြထားတဲ့ မြင်ကွင်းပါ။ အဲကနေ ကိုယ်သွားချင်တဲ့ နေရာကို စာတစ်လုံး ရိုက်စရာ မလိုပဲ Click ပေးပြီး သွားနိုင်ပါတယ်။
Internet Explorer9Beta ကို စမ်းသပ်ကြည့်ချင်သူများ အောက်ဖော်ပြပါ နေရာကနေ သွားရောက် ရယူ စမ်းသပ်နိုင်ပါပြီ။
ဒီအောက်က Video ကတော့ ကျွန်တော့် စက်ထဲက Internet Explorer9Beta ရဲ့ အသွင်အပြင်တစ်ချို့ကို မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ Video file လေးပါ။ HD နဲ့ လေ့လာကြည့်ပါ။
Last edited by KznT; 07-03-2011 at 06:03 PM..
ကိုကိုသီဟ, ကိုဦး, ချစ်သမီး, ဒဿဂီရိ, သက်နိုင်, အိုင်တီကောင်လေး, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, အေးမင်းအောင်, amaung344, AZM, bonge, g00gle, hellboy, kyaukphyu, minthike, phoetharlay, tu tu
Internet Explorer9အကြောင်းကို 26-03-2010, 05:21 AM တုန်းက Platform Preview မိတ်ဆက် အဖြစ်တဲ့ တစ်ခါ - 23-09-2010 09:57 PM တုန်းက Beta မိတ်ဆက် အဖြစ်နဲ့ အဖြစ်နဲ့တစ်ခါ ရေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ခု စာရေးတဲ့ အချိန်ကနေ ပြန်တွက်ရင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၁ လ ၁၂ ရက် ၉ နာရီ ၅၂ မိနစ်နဲ့ ၁၂ စက္ကန့် အကွာကပေါ့ - ( ဘယ်ရမလဲ WolframAlpha နဲ့ကို တွက်ထားတာ )
Internet Explorer9၏ အောင်မြင်မှုများ
အရင်လ ( ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်နေ့ ) က Internet Explorer9Release Candidate ဆိုပြီး Microsoft ကနေ Version အသစ်ထပ်ထုတ်တယ် - ထုတ်ပြီး ခု ဘယ်လောက်မှ မကြာသေးဘူး IE9Release Candidate ကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ဒေါင်းလုပ်ချတဲ့သူပေါင်း ၁၁ မီလီယံ ကျော်သွားပြီ - အရင် IE9 Beta ထုတ်တုန်းက ဒေါင်းလုပ်ချခဲ့ကြတဲ့ အရေအတွက်ရယ် ခု IE9Release Candidate ထွက်တဲ့ အချိန်မှာ ဒေါင်းလုပ်ချတဲ့ အရည်အတွက်ရယ် နှစ်ခု ပေါင်းရင် ၃၆ မီလီယံ တောင် ကျော်ခဲ့ပြီလို့ သိရတယ် - ပြောရရင် ဒီအောင်မြင်မှုဟာ သာမန် အောင်မြင်မှုတစ်ခုတော့ မဟုတ်ဘူး - ကိုယ်တိုင်က Google Chrome fun ဖြစ်နေလို့သာ Internet Explorer ကို သိပ်မသုံးဖြစ်ပေမယ့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ဒီ IE ကို ဘာကြောင့် ဒီလောက် အားပေးနေကြလဲ ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်လာတယ် - အဲ့တာကြောင့် Internet Explorer9ထုတ်ဖို့ဆိုပြီး စစမ်းသပ်တဲ့ ကာလ Platform Preview အဆင့်တည်းက ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သုံးကြည့်ပြီး သိခဲ့တာလေးတွေ ဖိုရမ်မှာ ပုံမှန် ရေးဖြစ်ခဲ့တယ် - စစချင်း Internet Explorer9Platform Preview နောက် Internet Explorer9Beta - ခု Internet Explorer9Release Candidate အကြောင်း ရေးဖို့ ဖြစ်လာပြီ - အားလုံးကလည်း Firefox fun ဖြစ်နေလို့လား မသိဘူး - Internet Explorer9အကြောင်း စာတက်ရင် ဘယ်သူမှ စိတ်ဝင်တစား ဖတ်တာ မတွေ့ရဘူး - ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကလည်း သိလာတာတွေဆို ပြောပြချင်စိတ်က ရှိနေတော့ အားမပေးလည်း ရေးနေတာပဲ
Internet Explorer9Release Candidate ရှိ ပြောင်းလဲမှုများ
အခုလည်း Version တစ်ခု တက်သွားပြီ ဆိုတော့ Internet Explorer9Release Candidate မှာ ဘာလို ပြောင်းလဲမှုတွေ ရှိလာသလဲ - ဘယ်လို features တွေ တိုးပြီး ပါလာမလဲ ဆိုတာ သိရအောင် စမ်းသုံးဖြစ်ခဲ့တယ် - Release Candidate ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်နဲ့ လိုက်အောင် အရင် Platform Preview နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်တော့ပဲ တော်တော်ကြီး အဆင့်မြင့်လာတာ တွေ့ရတယ် - ပြောရရင် သဘောကျသွားတယ် ပေါ့ဗျာ - အဲ့တော့ Internet Explorer9RC မှာ ဘာလို ပြောင်းလဲမှုတွေ ရှိလာသလဲ - ဘယ်လို features တွေ တိုးပြီး ပါလာမလဲ ဆိုတာ လူတိုင်း သိချင်ကြလိမ့်မယ် - အရင် BETA မှာတည်းက ပါတဲ့ Features တွေ အားလုံး အရင်လိုပဲ ပြန်ပါပါတယ် - အဲ့တာကိုတော့ အပေါ်က Internet Explorer9Beta မှာ ရေးခဲ့ပြီးသားမို့ ဒီမှာ ပြန်မဖော်ပြတော့ဘူး - Internet Explorer9RC မှာ ပါလာတဲ့ New features နဲ့ Improvements တွေ အကြောင်းကို သီးသန့် ဖတ်ချင်မယ် ဆိုရင် ဒီနေရာမှာ Internet Explorer9Release Candidate – New Features Summary ဆိုတဲ့ စာအုပ်ရှိပါတယ်။ Microsoft ကနေ အနှစ်ချုပ်ကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရေးထားပေးပါတယ်။ သူ့ကို Download ချပြီး ဖတ်လို့ ရပါတယ်။ တကယ်လို့ စာအုပ်နဲ့ မဖတ်ချင်ပဲ သူ့ရဲ့ ထူးခြားချက်ကို ပုံလေးတွေနဲ့ ကြည့်ချင်ရင် ဒီနေရာမှာ ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ တစ်ခြား Browsers တွေ ( Firefox 4.0 Beta 11, Chrome 9.0 Beta) နဲ့ Internet Explorer9ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို စမ်းစစ်ကြည့်တဲ့ အခါမှာ Results က ဘယ်လိုထွက်တယ် ဆိုတာ ဒီနေရာမှာ ကြည့်ကြည့်ပါ။ ကျွန်တော် Google Chrome သမားတောင် Internet Explorer ကို ချက်ချင်းပြောင်းရမလို ဖြစ်နေပြီ - တကယ်လို့ Internet Explorer9Release Candidate ရဲ့ Product Guide ကိုမှ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖတ်ချင်မယ် ဆိုရင် ဒီအောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Links တွေကနေ ဒေါင်းလုပ်ချပြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီ Product guide စာအုပ်ထဲမှာ Internet Explorer9နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်လို အသုံးဝင် ထိပ်တမ်း features တွေပါဝင်တယ် - ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားတယ် ဆိုတာ End users, Developers နဲ့ IT professionals သမားတွေ အလွယ်တကူ လေ့လာနိုင်အောင် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Internet Explorer9Release Candidate အား အသုံးပြုခြင်း
ဒီလောက်ထိ ညွှန်းလာပြီးပြီ ဆိုတော့ တစ်ချို့လည်း စမ်းသုံးချင်ကြတဲ့သူတွေ ရှိကောင်း ရှိမယ်။ Internet Explorer9RC ကို သုံးချင်ရင် လုပ်ရ ကိုင်ရတာ မခက်ပါဘူး - ပုံမှန် Software တစ်ခု install လုပ်သလိုပဲ Download ချပြီး Install လုပ်သုံးယုံပါပဲ - Download ကိုတော့ ဒီနေရာကနေ ယူနိုင်ပါတယ်။ Filehippo ကနေလည်း ယူနိုင်ပါတယ်။ အင်တာနက် ကောင်းမယ် ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာကနေ Download ယူပြီး Internet Connection နဲ့ တိုက်ရိုက်Install လုပ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာ Internet Explorer9ကို Windows XP သမားတွေ သုံးလို့ မရပါဘူး - Windows XP သမားတွေက သုံးချင်ရင် Internet Explorer 8 ပဲ သုံးလို့ ရပါမယ်။ Internet Explorer9RC ကို သုံးချင်ရင် ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Windows က အနည်းဆုံး Windows7(x86 or x64) နဲ့ Windows Vista SP2 (x86 or x64) ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါကို မမေ့ပါနဲ့။ သက်ဆိုင်ရာ ဖိုင်ကို Download ချပြီးရင် install လုပ်ပါ။ Restart တောင်းကောင်း တောင်းပါလိမ့်မယ်။ Restart ပေးပြီး ပြန်တက်လာရင် စသုံးလို့ ရပါပြီ။
Internet Explorer9Release Candidate နှင့် ပြဿနာရပ်များ
Internet Explorer9Release Candidate ကို စသုံးပြီ ဆိုရင် တစ်ခြားတော့ ထူးထူးခြားခြား ပြဿနာ မရှိပါဘူး - ဒါပေမယ့် ခေါင်းခြောက်စေမယ့် ပြဿနာ တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ အဲ့တာက သူ့ကို တင်တင်ပြီးချင်း Restart ပေးပြီး ပြန်တက်လာရင် Google talk သုံးတဲ့ သူတွေ Chat box မှာ အရင် မြန်မာလို အဆင်ပြေပြေ တွေ့နေရာကနေ ကကျိုးကကြောင်ပုံစံတွေ စမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ပြဿနာကို ဘာကြောင့် အဲ့လို ဖြစ်မှန်းမသိလို့ အင်တာနက်ထဲ အချိန်တော်တော်ကြာအောင် စာလိုက်ဖတ်ခဲ့ ရသေးတယ်။ ခုတော့ အဲ့အတွက် စိတ်မပူပါနဲ့ အဖြေရှိနေပါပြီ။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း Internet Explorer9RC ရဲ့ ညာဘက် အပေါ်ထောင့်မှာ ရှိနေတဲ့ Tools icon ကနေပြီး Internet options ကို ဝင်လိုက်ပါ။
အဲ့ကနေပြီး General tab အောက်က Appearance အောက်မှာ ရှိတဲ့ Fonts button ကို နှိပ်ပြီး တက်လာတဲ့ box မှာ Zawgyi-One ကို ရွေးပေးပြီး OK ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆို အားလုံး ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
Internet Explorer အား Uninstall လုပ်ဆောင်ခြင်း
ဘယ်ဟာတွေ ဘယ်လောက်ကောင်းပါတယ် ပြောပြော Release Candidate ဆိုတာ Stable မဟုတ်သေးတာကြောင့် တစ်ခြား ပြဿနာလေးတွေ အနည်းနဲ့ အများ ရှိနေပါသေးတယ် - အရမ်း ပြည့်စုံပါတယ်လို့တော့ မဆိုနိုင်သေးပါဘူး - ဒါ့ကြောင့် စမ်းသပ်သုံးစွဲပြီးကာမှ နဂို Internet Explorer 8 ကိုပဲ ပြန်လိုချင်သူတွေ အတွက် Internet Explorer9Release Candidate ကို Uninstall လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် အဆင့်တစ်ချို့ တစ်ပါတည်း ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး Windows Vista မှာ ဆိုရင် Control Panel\_Programs\_Programs and Features ကို သွားပြီး View installed updates ကို ဝင်ပါ။ ( Windows7လည်း အဲ့နေရာပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ )
Installed Updates စာမျက်နှာကို ရောက်ရင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း Windows Internet Explorer9Release Candidate ဆိုတဲ့ Update ကို ရှာပြီး Uninstall ပေးပါ။ Uninstall ပေးပြီးရင် သူက Restart တောင်းပါလိမ့်မယ်။
Restart ပြန်တက်လာရင် နဂိုအတိုင်း Internet Explorer 8 ပဲ ပြန်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
Internet Explorer9browser အား Windows7တွင် Slipstream လုပ်ဆောင်ခြင်း
တစ်ချို့ကျတော့လည်း Internet Explorer9က Features တွေ အရမ်းကောင်းတယ် ဆိုပြီး ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ Windows7ခွေထဲကို Windows တင်တည်းက ပါလာအောင် တစ်ခါတည်း Slipstream လုပ်ချင်ကြတဲ့ သူတွေလည်း ရှိလိမ့်မယ်။ အဲ့အတွက် ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ရမယ် ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းကို ဒီနေရာမှာ ဖတ်ပါ။
ကျွန်တော် အရင်တုန်းက စာတစ်ပုဒ်ရေးရင် ဘယ်တွေကနေ ဖတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ မဖော်ပြဖြစ်ခဲ့ဘူး - ခုနောက်ပိုင်းကနေ စပြီး စာတစ်ပုဒ်ရေးပြီးတိုင်းမှာ ဘယ်တွေကနေ ဖတ်ခဲ့တယ် ဆိုတာကို မိသားစုဝင်များ ဆက်စပ်လေ့လာနိုင်အောင် ပူးတွဲဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်။ ဒီအောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Links တွေကတော့ ခုရေးနေတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ဖြစ်လာဖို့ ကျွန်တော် ဖတ်ခဲ့တဲ့ စာမျက်နှာတွေပါ - အရင်းအမြစ်ကိုမှ လေ့လာချင်သူများ လေ့လာနိုင်အောင် ပူးတွဲဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Last edited by KznT; 08-03-2011 at 07:02 AM..
ကိုကိုသီဟ, ချစ်သမီး, ဒဿဂီရိ, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းသူအောင်, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, မောင်ပေါ်ဦး, amaung344, arkaraung, bagothar85, bonge, g00gle, khaing king, kyaukphyu, minthike, mykyaw, pannuko, PyaitSone, sky4ster, thetnaung87, tu tu, yawnathan
16-03-2011, 06:03 AM
Internet Explorer9Final Version
ဒီနေ့ Internet Explorer9Final version ထွက်တယ် - ဘာတွေ ဘယ်လိုကောင်းတယ် - ဘာတွေ အားသာချက် အားနည်းချက်တွေဆိုတာကိုတော့ Internet Explorer9Platform preview ကတည်းက စရေးခဲ့တာ မို့လို့ ဆက်တိုက်ဖတ်ခဲ့တဲ့ သူတွေဆိုရင် တော်တော်များများ သိပြီး ဖြစ်လောက်မယ် ထင်မိပါတယ် - Microsoft က ပြောတာတော့ Performance နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး IE9 ကို Low-end machines ( ဆိုလို Graphics cards စွမ်းဆောင်ရည် သိပ်မကောင်းတဲ့ စက် ) တွေမှာတောင် Performance ကောင်းစေမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ် - ပြောတိုင်းယုံရတာမျိုး လက်သံမခံနိုင်လို့ ကိုယ်တိုင် IE9 Test drive မှာ စိတ်ထဲရှိတာလေးတွေ လိုက်စမ်းလိုက်သေးတယ် - အရမ်းကြီး နားမလည်တော့ IE9 နဲ့ Chrome ဘယ်ဟာပိုသာလောက် မလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့တော့ မတတ်ခဲ့ဘူး - ဒါပေမယ့် Mozilla ထက်သုံးလို့ ပိုကောင်းတာတော့ လက်ခံမိတယ် - လောလောဆယ် စက်မှာတော့ Google Chrome ကို Default ထားပြီး IE9 ကို 2nd အနေနဲ့ သုံးနေဖြစ်တယ် - Mozilla ကိုတော့ ထိလိုက် မထိလိုက်ပဲ ( မကောင်းလို့ မဟုတ်ပါ အထိုင်အထနှေးတာ ကျွန်တော် သဘောမကျလို့ )
အဲ့တော့ RTM ထွက်ပြီဆိုတော့ ဘာတွေ ဖတ်သင့်မလဲ ဆိုတာ အင်တာနက်ထဲ ဆက်ပြီး လိုက်ကြည့်မိတယ် - အဲ့လို လိုက်ကြည့်ရင်း ဖတ်မိသိခဲ့တာတွေထဲက အကျဉ်းလောက်ကို အမေးအဖြေ ပုံစံမျိုးနဲ့ ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ် - အကျယ်ကိုလည်း လေ့လာနိုင်အောင် Links တွေ ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ
( 1 ) Internet Explorer9ကို ဘယ် OS တွေမှာ သုံးလို့ ရမလဲ ??
Windows7နဲ့ Windows Vista SP2 မှာ သုံးလို့ ရပါမယ် - Windows Vista SP1, Windows XP နဲ့ သူတို့ထက် နိမ့်တဲ့ Versions တွေမှာ သုံးလို့ မရပါ။
(2) Internet Explorer9Final version ကို ဘယ်မှာ Download လုပ်ရမလဲ ??
ဒီနေရာမှာ ယူပါ။ >> http://www.beautyoftheweb.com/#/download
( အဲ့ Link ကနေ ယူရင် Internet နဲ့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ပြီး Install လုပ်ငန်းစဉ်က အလုပ်လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒါ့ကြောင့် Internet connection မရှိတဲ့ အိမ်က စက်မျိုးမှာ Internet Explorer9Final version ကိုသွင်းဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး - တကယ်လို့ သွင်းချင်မယ်ဆိုရင် Internet Explorer9Final Offline Installers ရှိဖို့လိုပါတယ်။ )
(3) Internet Explorer9Final Offline Installers ဘယ်မှာ ရနိုင်မလဲ ??
အောက်ဖော်ပြပါ နေရာတွေမှာ ရနိုင်ပါတယ်။
(4) Internet Explorer9Final Version မှာ ဘာထူးခြားမှုတွေ - ဘာတိုးတက် ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ထားသလဲ - ကျုပ်တို့ ဘာတွေ သိထားဖို့ လိုသလဲ ??
Internet Explorer9Final Version မှာ ပါဝင်လာမယ့် performance improvements, tracking protection, hang recovery နဲ့ တစ်ခြား သိထားသင့်တဲ့ features အသိတွေအကြောင်းကို လေ့လာနိုင်ဖို့ Microsoft ကနေ Internet Explorer9Final Version နဲ့အတူ Internet Explorer9Fact Sheet ဆိုတာကို ထုတ်ပေးထားပါတယ်။ ဒီနေရာကနေ ယူပြီး လေ့လာကြည့်ပါ။
(5) Internet Explorer9ကို Windows7ISO နဲ့ slipstream ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ??
အပေါ်မှာ ရေးထားခဲ့တဲ့ Internet Explorer9Release Candidate က အကြောင်းအရာတွေ ကို ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။
(6) Internet Explorer9ကို Uninstall ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ရမလဲ ??
(7) Internet Explorer9ကို တစ်ခြား Language နဲ့ သုံးချင်တယ် - Language Packs တွေ ဘယ်မှာ ရနိုင်မလဲ ??
( 8 ) Internet Explorer9နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တစ်ခြား လေ့လာသင့်သေးမယ့် နေရာတွေ ဘယ်နေရာတွေ ရှိဦးမလဲ ??
အောက်ဖော်ပြပါ နေရာတွေကို မဖြစ်မနေ လေ့လာထားသင့်ပါသေးတယ်။
Last edited by KznT; 16-03-2011 at 06:13 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 21 ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုကိုသီဟ, ချစ်သမီး, ဒဿဂီရိ, သန့်ဇင်ဌေး, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, နိုးတူး, amaung344, arkaraung, bagothar85, bonge, g00gle, minthike, PyaitSone, sky4ster, thetnaung87, tu tu, yawnathan
Internet Explorer9Final version ဆိုပြီး ထွက်လာတော့ Chrome နဲ့ ဒီ IE9 ကိုပဲ တစ်လှည့်စီ လှည့်သုံး နေမိတယ် - တစ်ခုရှိတာ Chrome က သုံးလာတာ ကြာပြီဆိုတော့ ဘာပဲလိုလို တစ်ခုခု ဖြစ်ရင် ဟိုကလိ ဒီကလိ ဟိုပြင် ဒီပြင် တော်တော်လေး လုပ်တတ်နေပြီ - Internet Explorer ဆိုတာကကျတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတည်းက မသုံးတာ - အဲ့တုန်းကတော့ အင်တာနက်သုံးချင်ပြီဆိုရင် အင်တာနက်ဆိုင်သွားရ တာပေါ့ - အင်တာနက်ဆိုင်ဆိုပေမယ့် နက်ကလည်း Google ဝင်ဖို့ကို ၃မိနစ်လောက် စောင့်ရတယ် - ဒီကြားထဲ IE က အဲ့တုန်းက သုံးတာ IE6 ဖြစ်မလား မပြောတတ်ဘူး - တော်တော်ကိုဆိုးတာ - လေးလံလိုက်တာမှ လိပ်ကို ပိဿလေးတင်ထားသလား မှတ်ရတယ် - ပြင်နည်း ဆင်နည်းဆိုတာလည်း ဘာမှကို မတတ် - အဲ့လိုပေတေသုံးခဲ့တဲ့ ရက်လေးတွေ ပြန်သတိရမိတယ်
ခု Internet Explorer9ဆိုပြီး ဖြစ်လာပြီ - အရင်က သိပ်မသုံးဖြစ်တော့ ပြင်တာ ဆင်တာလည်း Chrome လောက် သိပ်များများစားစား မသိဘူး - အဲ့လိုနဲ့ ဒီနေ့ စာလိုက်ဖတ်ရင်း TweakIE9 ဆိုတဲ့ Freeware ပြင်ဆင်ရေး Tool လေးတစ်ခု တွေ့လာခဲ့တယ် - ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Internet Explorer9က ကိုယ်မကြိုက်တာလေးတွေကို တစ်ခြားကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပုံစံလေးတွေ ပြင်လို့ဆင်လို့ ရအောင် ရေးထားပေးတဲ့ tweak tool လေး တစ်ခုပေါ့ - သုံးရတာလည်း အရမ်းလွယ်တယ် - ကျွန်တော့်လို End User တစ်ယောက်အတွက်တော့ သိပ်အဆင်ပြေတာပဲ - User Interface ကိုတော့ အောက်မှာသာ ကြည့်ပါ။
ပုံကြည့်တာနဲ့ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ တန်းကနဲ နားလည်လွယ်တယ် - Internet Explorer9သုံးသူများအတွက်တော့ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ Tool လေးတစ်ခုပါပဲ -
Last edited by KznT; 18-03-2011 at 07:12 PM..
ကိုကိုသီဟ, အိုင်တီကောင်လေး, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မြင့်မိုရ်, amaung344, arkaraung, bagothar85, bonge, g00gle, minthike, sky4ster, tu tu
19-03-2011, 05:36 AM
ပြန်စာ - TweakIE9
ကောင်းတယ်ဗျာ ie9 ခုလို စာဖတ်ရတာကို အရမ်းသဘောကျတယ်။
ကိုကေဇက် စာတွေ ဖတ်ရတာ အနှစ်သာရလဲ ရှိသလို နည်းပညာဆိုဒ်တွေဖတ်မှု အားနည်းတဲ့ ကျွန်တော့်လို
လူတွေတွေအတွက် သိပ်အဆင်ပြေတာပဲ။ အဂ်လိပ်လဲ ဖတ်တာ အားနည်းတော့ ခုလို ပြန်မျှဝေတာကို ကျေးဇူးပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ အိုင်တီကောင်လေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
arkaraung, bonge, KznT
ပြန်စာ - Internet Explorer9နှင့် သူ၏ အနာဂတ်
အကိုရေ ကျနော် IE9 ကိုတင်လိုက်ပါတယ်
အဲဒီအခါမှာ ကိုကေဇက်အမ်တီပြောသလိုပဲ ဂျီတော့မှာဖောင့်ပြသနာတက်ပါတယ်
ဒါနဲ့ ကျနော်လဲ ကိုကေဇက်ပြောတဲ့နည်းအတိုင်း ie option ထဲကနေ ဖောင့်ကိုဝင်ပြင်တော့ ဂျီတော့မှာအဆင်ပြေသွားရောဗျ
ခက်တာက ကျနော် IE9 မှာ မြန်မာဖောင့်မရတော့တာပဲ အဲဒါ ဘယ်နေရာများမှားနေသလဲဗျာ
IE browser မှာမြန်မာလို၇ိုက်ရင် တုံးအကွက်တွေပဲပေါ်နေပါတယ် IE ကနေမြန်မာဆိုဒ်တွေကစာတွေဖတ်ရင်လဲ တုံးအကွက်တွေပဲတွေ့ရတယ် ကူညီပေးပါအုံးဗျာ အိုင်အီးနိုင်းရဲ့ပေါ့ပါးမှူလေးကိုသဘောကျလို့ပါ
ပြန်စာ - Internet Explorer9နှင့် သူ၏ အနာဂတ်
တစ်ခုခုတော့ လွဲနေတယ် ထင်တယ် - အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အချက်တွေ အတိုင်း လုပ်ဆောင်ထားမထား စစ်ကြည့်ပါ
- AlphaZawGyi 2008 တင်ထားပါသလား ??
မတင်ထားလျှင် ဤနေရာမှ နေ၍ Download ရယူ install လုပ်ပါ။
- AlphaZawGyi 2008 တင်ပြီးသည်နှင့် အောက်ဖော်ပြပါနေရာများသို့ ဝင်ရောက် စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ ဖော်ပြပါအတိုင်း ပြင်ဆင်ယူပါ။
အဆင့် ( ၁ )
( မှတ်ချက် - ထို့သို့ ပြင်ဆင်လိုက်ခြင်း အားဖြင့် Unicode ဖြင့် ရေးသားထားသော မြန်မာဘလော့များ ဖတ်၍ ရမည် မဟုတ် - အကယ်၍ Unicode ဖြင့် ရေးသားထားသော မြန်မာဘလော့များ ဖတ်၍ ရချင်လျှင် ဖော်ပြပါအဆင့်အတိုင်း ပြန်သွား၍ Select လုပ်ထားသည်များ ပြန်ဖြုတ်ရမည်။ )
Last edited by KznT; 22-03-2011 at 01:41 AM..
သန့်ဇင်ဌေး, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, မြင့်မိုရ်, amaung344, AZM, bagothar85, bonge, g00gle, htun30, pannuko, paradise(SMTU), phoetharlay, sky4ster, yawnathan
ကျနော် ignore font styles specified on webpages မှာ အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ထားမိလို့ပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ sky4ster အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
17-04-2011, 10:06 PM
ပို့စ် 28 ခုအတွက် 78 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
All posts with PDF....................
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ mmkyioo အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သန့်ဇင်ဌေး, amaung344, bagothar85, bonge, g00gle, KznT
Find More Posts by mmkyioo
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်က Hot နေတဲ့ IE vulnerability အတွက် Update ထွက်ပြီနော်။ Windows Update လုပ်ရင် တွေ့ပါမယ်။ Update လုပ်လိုက်ပါ။ သူ့အကြောင်း သိချင်ရင်
မှာသွားဖတ်ပေါ့။ Update နဲ့ ဆိုင်လား မဆိုင်လားတော့ မသိဘူး။ IE က ရေရေလည်လည်ကို မြန်သွားတာ။
င်္Facebook Scrolling Problem တွေ မဖြစ်တော့ဘူး။ မြန်ချက်က Mouse pointer တောင် မနည်းထိန်းရတယ်။
မောင်သံသရာ, mmkyioo, tu tu
how to, internet, internet explorer
Google ၏ ပြောင်းလဲမှုများ အကြောင်း KznT အထွေထွေဗဟုသုတ 42 08-02-2012 08:37 AM
အသုံးဝင် Google Docs Features များအကြောင်း KznT အထွေထွေဗဟုသုတ 8 21-05-2011 11:20 AM
Adobe Photoshop CS5 New Features ဇွဲသူရိန် E-books များ023-04-2010 04:38 PM
Core Java2Vol II Advanced Features 7th Edition kothu E-books များ004-02-2008 01:58 PM
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 05:12 PM